Onye anyị na-ejere ozi - Prairie State Legal Services
onye anyị na-ejere ozi
Na mgbakwunye na ijere ndị niile nwere ego na ezinụlọ, PRAIRIE Steeti na-arụ mkpa pụrụ iche nke ụfọdụ obodo ndị nwere ike ịba uru, gụnyere:
- Ndị lagoro ezumike nka, ndị otu na-arụ ọrụ, ndị nchekwa na ndị nwunye ha na ndị nnọchi anya ha.
Pịa ebe a iji mụtakwuo banyere Illinois Armed Forces Legal Aid Network.
- Okenye okenye (60 +)
Pịa ebe a iji mụtakwuo banyere enyemaka anyị gbasara iwu maka okenye okenye na Bekee ma ọ bụ Spanish.
- Ndị bu nje HIV / AIDS
Pịa ebe a ka ịmụtakwu banyere oru HIV / AIDS anyị na Bekee ma ọ bụ Spanish.
* Ulo elu na / ma obu oke ruru eru nwere ike itinye aka na ndi a.
Na-achọ onye ọ bụla ka ọ nọrọ na nchekwa 4 nke Julaị! A na-emechi ụlọ ọrụ ndị ọrụ iwu nke Prairie steeti maka emume ezumike ahụ.	... Lee MoreLee obere